File:Coat of arms of New Zealand.svg - ဝီကီပီးဒီးယား
Size of this PNG preview of this SVG file: ၆၂၂ × ၅၉၉ ပစ်ဇယ်. အခြား ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု: ၂၄၉ × ၂၄၀ ပစ်ဇယ် | ၄၉၈ × ၄၈၀ ပစ်ဇယ် | ၆၂၃ × ၆၀၀ ပစ်ဇယ် | ၇၉၇ × ၇၆၈ ပစ်ဇယ် | ၁၀၆၃ × ၁၀၂၄ ပစ်ဇယ် | ၆၈၀ × ၆၅၅ ပစ်ဇယ်။
မူရင်းဖိုင် ‎(SVG ဖိုင်, ၆၈၀ × ၆၅၅ pixels ကို အကြံပြုသည်, ဖိုင်အရွယ်အစား - ၇၇၀ KB)
ဖော်ပြချက်Coat of arms of New Zealand.svg
ရက်စွဲ ၂၈ မတ် ၂၀၀၉
ကျွန်ုပ်၊ ဤလုပ်ဆောင်ချက်၏ မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်အနေဖြင့် ဤနေရာမှ အောက်ပါလိုင်စင်များအောက်တွင် ထုတ်လွှင့်ပါသည်:
ဤဖိုင်သည် Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic နှင့် 1.0 Generic လိုင်စင်အောက်တွင် လိုင်စင်သတ်မှတ်ထားပါသည်။
သင်အလိုရှိရာ လိုင်စင်ကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
ကာလပေါ် ၀၄:၂၀၊ ၂၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ ၆၈၀ × ၆၅၅ (၇၇၀ KB) Sodacan minor adjustments
၀၇:၃၃၊ ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ ၆၈၀ × ၆၅၅ (၇၆၉ KB) Sodacan Reduce size and minor fixes
၀၆:၁၃၊ ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ ၅၁၂ × ၅၂၅ (၉၂၅ KB) Renamed user eac0b2be0a1f4460b34da91725dfb099 Minified and validated SVG.
၂၃:၂၅၊ ၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၅ ၅၉၉ × ၆၁၄ (၁.၉ MB) Stasyan117 deleted raster
၀၁:၃၂၊ ၁ ဇွန် ၂၀၁၁ ၆၄၀ × ၆၂၀ (၂.၁၄ MB) Fry1989 shield
၁၆:၂၃၊ ၈ ဇူလိုင် ၂၀၀၉ ၆၄၀ × ၆၂၀ (၂.၁၄ MB) Sodacan Fix
၂၁:၅၁၊ ၂၄ မေ ၂၀၀၉ ၆၄၀ × ၆၂၀ (၂.၁၁ MB) Sodacan crown fixes
၁၅:၃၂၊ ၁၇ မေ ၂၀၀၉ ၆၄၀ × ၆၂၀ (၂.၀၈ MB) Sodacan fixed ships
၁၆:၅၉၊ ၄ မေ ၂၀၀၉ ၆၄၀ × ၆၂၀ (၂.၀၈ MB) Sodacan spacing
၀၈:၀၈၊ ၃၀ မတ် ၂၀၀၉ ၆၀၀ × ၆၂၀ (၂.၀၈ MB) Sodacan Colour fixes
ab.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
als.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
am.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
ang.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
an.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
arc.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
arz.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
azb.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
bar.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
bat-smg.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
ba.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
be-tarask.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
be.wikipedia.org တွင် အသုံးပြုမှု
"https://my.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_New_Zealand.svg" မှ ရယူရန်